कसरी संभव छ साम्राज्ञीसँग दयाहाङ ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कसरी संभव छ साम्राज्ञीसँग दयाहाङ ?
फिल्मी फण्डा । यस वर्ष विगतका तुलनामा निर्माणधिन फिल्महरु कम रहेका छन् । ठूला ब्यानरबाट निर्माण भएका तथा प्रतिक्षित फिल्महरुको क्ल्यास कम हुने आंकलन गरिएको थियो । तर, कम फिल्महरु निर्माण भए पनि रिलिज क्यालेण्डर व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । यस्तै आगामी भाद्र १३ गते दुई प्रतिक्षित फिल्महरु सँगै पर्दामा आउने भएका छन् । यसअघि यस मितिमा मारुनी मात्रै थियो । अब, सोही मितिमा अर्को प्रतिक्षित फिल्म कबड्डी कबड्डी कबड्डी आउने भएको छ ।
फिल्म मारुनी र कबड्डी कबड्डी कबड्डी एक साथ आउने भएपछि हल्ला शुरु भएको छ । यो कसरी संभव भयो ? यस बर्ष फिल्म कम भएपनि एकैसाथ रिलिज गर्नुपर्ने कारण के हो ? यसको सरल जवाफ हुनसक्छ बेथिती । फिल्म प्रदर्शनमा बेथिती बढ्दो क्रममा छ । वितरकहरु बीचको प्रतिस्पर्धाले निर्मातालाई फसाउँदै एकै दिन दुई फिल्म रिलिजको तयारी भएको हो । अब यो निर्णयसँगै साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र दयाहाङको स्टारडमको मापन शुरु हुने भएको छ ।
स्थापित ब्यानरमा कबड्डी कबड्डी कबड्डीमा दयाहाङ रहेका छन् भने मारुनीमा साम्राज्ञी लिड छिन् । उनीसँगै नायक पुष्पल खड्का पनि छन् । दयाहाङको क्रेज घट्दो क्रममा रहेको छ भने साम्राज्ञीको बढ्दो क्रममा । तर यी दुई फिल्ममा स्थापित ब्यानर र स्टारडमबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । त्यसपछि बल्ल फिल्मको कन्टेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
नवल नेपालको निर्देशनमा मारुनीमा पुष्प खड्का, साम्राज्ञी आरएल शाह, रेविका गुरुङलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । सुपरहिट फिल्म कबड्डी को तेस्रो सिरिज हो कबड्डी कबड्डी कबड्डी । रामबाबु गुरुङ निर्दे्िशत फिल्ममा दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा, बुद्धि तामाङ, रिश्मा गुरुङ, विल्सन विक्रम राईलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
कबड्डी कबड्डी कबड्डीको निर्माण टिम अघिल्ला सिरिजको सफलताको निरन्तरता दिनुपर्ने दवावमा देखिन्छ । मारुनी राम्राज्ञी र पुष्पको अभिनयको दममा निर्भर छ । साम्राज्ञीका धेरैजसो फिल्म सफल भए पनि पुष्पको फिल्मी ग्राफ सफल देखिदैन । उनी अभिनित फिल्म दर्पण छायाँ २ रजतपटमा असफल फिल्म मानिन्छ भने मंगलमबाट उनले प्रशंसा पाएका थिए । पुष्प अभिनित अर्को फिल्म दाल भात तरकारीले सिगंल थियटरका एकाध हलहरुमा प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाएको दावी गरेपनि फिल्मले सकरात्मक प्रतिक्रिया भने पाएन ।